Gọọmentị niile nọ na ya: Revival and Reforms in India Aviation
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » Gọọmentị niile nọ na ya: Revival and Reforms in India Aviation
Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • India na -agbasa ozi ọma • News • Iwughachi • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Ụgbọ elu India
Ngalaba ụgbọ elu India, gụnyere ndị ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ elu, na ọrụ ndị ọzọ, abanyela na nrụgide ego n'ihi ọrịa COVID-19.
Gọọmentị India ejirila usoro ịtụte ngalaba ụgbọ elu India.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Rs. A ga -emefu crores 25,000 maka uto na mmepe nke ngalaba ụgbọ elu n'ime afọ 4 ruo 5 na -esote.
Ọrụ ime ụlọ erutela ihe dị ka 50% nke ọkwa pre-COVID, ọnụ ọgụgụ ndị na-ebu ibu arịbaala site na 7 ruo 28.
Onye minista steeti na ministri ụgbọ elu India, General (Retd.) Dr. VK Singh, kwuru na nzaghachi edere na Shri MV Shreyams Kumar na Rajya Sabha taa na isi ihe rụpụtarala n'agbanyeghị ọrịa ọjọọ.
Nkọwa nke nnukwu ihe gọọmentị mere ịtụte ngalaba ụgbọ elu obodo N'ime oge a, gụnyere ihe ndị ọzọ, dị ka ndị a:
Nye nkwado maka ụgbọ elu site na usoro amụma dị iche iche.
Nye akụrụngwa ụgbọ elu site na ọdụ ụgbọ elu India na ndị na -arụ ọrụ onwe.
Nkwalite itinye ego na ọdụ ụgbọ elu dị ugbu a na nke ọhụrụ site n'ụzọ PPP.
Nye Sistem Nsoro ikuku nke ọma.
Site na ndokwa ikuku ikuku, agbaliwo mbọ hụ na ndị na -eburu anyị ụgbọ ala na mba ofesi na -emeso ndị otu anyị ihe n'ụzọ ziri ezi.
Ọnụ ego ụtụ maka ngwongwo na ọrụ (GST) belatara ruo 5% site na 18% maka ọrụ mmezi ụlọ, ndozi na iwepụ (MRO).
Enweela ohere ịgbazinye ụgbọ elu na gburugburu ebe nkwado ego.
Nhazi ụzọ na mbara ikuku India na nchikota ya na Indian Air Force maka njikwa ikuku dị mma, ụzọ dị mkpụmkpụ na obere mmanụ ọkụ.
Nhazi na ndị nwere mmekọ iji dozie okwu.
Gọọmentị emeela ọtụtụ ihe maka mgbanwe na ngalaba ụgbọ elu obodo nke mba ahụ site n'inye akụrụngwa na akụrụngwa kacha elu. Nkwalite itinye ego n'ọdụ ụgbọ elu dị ugbu a na nke ọhụrụ site n'ụzọ PPP emeela.